Imveliso Izixhobo - Yuyao Jera Line Lokulinganisa Co., Ltd.
UJera uzinikele ekuphumezeni ukubanakho kokubonelela kunye nokwenza imveliso ebanzi nethembekileyo kwizisombululo zonxibelelwano zonxibelelwano. Isikhuthaza ngokuqhubekekayo ukuba siphucule kwaye siphucule amandla emveliso yethu. UJera usebenzisa ubuchwephesha bemveliso yanamhlanje, isisombululo esonga iindleko kunye nezixhobo zokuzenzekelayo ukufikelela kwimveliso ephezulu yokusebenza kakuhle.
Ifektri yaseJera inesakhono seemitha ezingama-2500, uninzi lweyunithi yezixhobo esizisebenzelayo ziye zasetyenziswa kwimveliso yemihla ngemihla.
UJera uneeworkshops ezili-10 ezineetekhnoloji ezihambelanayo:
1) Umasifundisane wentambo ye-fiber optic
2) Iplastiki yokubumba iplastiki
3) Cinezela ukwakha iworkshop
4) ucingo Helical bokwakha workshop
5) Izixhobo zokusebenzela umasifundisane
6) i-CNC yeziko lokusebenzela umatshini
7) CNC lathes workshop
8) IAluminiyam kunye nezinki yokufihla umasifundisane
9) Umasifundisane wentsimbi
10) Umhlangano wendibano yemveliso
Umgca weJera usebenza ngokwe-ISO 9001: 2015, esivumela ukuba sithengise kumazwe angaphezu kwama-40 kunye nemimandla enje ngeCIS, iYurophu, uMzantsi Melika, uMbindi Mpuma, iAfrika neAsia. Ngokuqhubeka siphucula izibonelelo zethu zemveliso ukusenza ukuba sikhuphisane ngakumbi kwaye sikwazi ukubonelela ngezithembiso ezifanelekileyo nomgangatho ophezulu kubathengi bethu.
UJera uzibophelele ekuboneleleni ngexabiso elifanelekileyo, umgangatho wokuzithemba, imveliso ekhawulezayo kunye nenkonzo ye-OEM kubathengi bethu, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi, injongo yethu izimisele ukwakha ubudlelwane bexesha elide kunye noluthembekileyo.